नेपाल आज | यौन–भोक, भोग र सम्भोग ?
यौनलाई बुझ्न यौनारम्भमा जानुपर्छ । जसलाई वयःसन्धि पनि भनिन्छ, अंग्रेजीमा प्युवर्टी । प्युवर्टी नै मानव जीवनको एउटा ढोका हो । यसैले यौवनको ढोका खोलेर यौनारम्भमा प्रवेश गराउँछ । किशोरावस्थाको प्रवेशद्वार हो, प्युवर्टी । जीवनको वसन्तकाल ! सौन्दर्यमुखी हुन्छ मानिस । मदकाल अर्थात् कामऋतुमा प्रवेश गर्छ । प्रकृतिजस्तै प्राणी–जीवन पनि ऋतुचक्रमा घुम्न थाल्छ । यौनेच्छ सुरु हुन्छ । हामी ठान्छौं युवाकाल हो तर युवा हैन, यौवनकाल हो, यो ।
यौनेच्छा अर्थात् यौनको आवश्यकतालाई मात्र बुझेर युवा वा वयस्क हुँदैन । यौनको मर्यादालाई पनि बुझ्नुपर्छ । प्रीति र रति यौनेच्छासँग गाँसिएका छन् । तर प्रीतिको आफ्नै रीति छ । रतिको आफ्नै गति छ । एउटा क्रियाबाट उत्पन्न हुने प्रक्रिया हो– यौनेच्छ । प्युवर्टीको वाइप्रडक्ट (सह–उत्पत्ति) हो, यो । जब यो प्रक्रियामा मानिस प्रवेश गर्छ उसले आफूलाई युवा ठान्न थाल्छ तर हैन ।